Ukuthetha kwindawo yokusebenzela i-Earthquake, İmamoğlu yiprojekthi ye-Channel Istanbul Murder | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulUkuthetha kwindawo yokusebenzela i-Earthquake, I-amomamoğlu yiprojekthi ye-Channel Istanbul Murder
Imamoglu ijelo lithethe inyikima ngokubulala inyanzeliso istanbul
Ethetha kwi-Istanbul Earthquake Workshop, uSodolophu wase-Istanbul Metropolitan Municipality Ekrem İmamoğlu wanikwa iprojekthi ye "Channel Istanbul". Echaza ukuba iCanal Istanbul ayisiyonkqubo yokuhamba nje yaselwandle, uImamoglu waveza ukuba le projekthi ibandakanya umngcipheko onokuthi uguqule inkqubo yolungelelwaniso lwendalo yesixeko nasemhlabeni naselwandle.
Amachibi, iziseko, indawo yezolimo, indawo yokuhlala, inkqubo yomhlaba wamanzi kunye nenkqubo yothutho yesixeko ichaphazeleka kakhulu kule projekthi. Ngaphandle kokutshatyalaliswa komhlaba wezolimo, esi siqithi siyakwakhiwa phakathi kwe-Irabul kunye nejelo elitsha lokuvulwa, imeko yokuvalelwa kwabemi be-8 yezigidi bavela. Ngale projekhthi, i-8 yezigidi iya kuvalelwa kwindawo enomngcipheko welizwe. " U-amomamoğlu wakhankanya ukuba amaziko amaninzi anomdla, izixeko, iifektri, izikolo kunye nemisebenzi zinokudalwa zinemali ekufuneka zichithwe eKhanal İstanbul wathi, ngomnye umba wokuba izigidi zabemi kumda wendlala bangaqeshwa kwizixeko nakwiilali zabo. Ngamafutshane, le projekthi ayisiyiyo iprojekthi yokungcatsha i-Istanbul. Yiprojekthi yokubulala ngokusemthethweni. Yiprojekthi yentlekele engeyomfuneko eIstanbul. Xa le projekthi igqityiwe, i-Istanbul iya kugqitywa ..
Iworkshop ye Earthquake ğı, ejongene nomcimbi wenyikima, enye yezona ntlekele ziphambi kwe Istanbul, iqale e Istanbul Congress Center. UTayfun Kahraman, iNtloko yeSebe loLawulo lweNgozi yoMngcipheko kunye nokuPhuculwa kweDolophu, uMasipala weNqila ye-Istanbul (i-IMM) wenze intetho yokuqala kwindibano eza kubanjwa phakathi kweDisemba 2-3 ngoDisemba. Emva kokuthatha umbhobho, uKahraman, uMongameli we-IMM u-Ekrem Imamoglu, eIstanbul, ngenxa yendawo zokuhlala ezichatshazelwe yenye yezona ndawo zinobungozi emhlabeni zaye zasekwa kwi-stress. Kule ndibano, uİmamoğlu wathi bahlangana ukwenza imephu yendlela yesixeko. U-Imamoglu wathi ngaphambili, izinto azikhange zisebenze kwaphela e-Istanbul okanye azange zisebenze njengoko befanele, elbette Kukho, ewe, izizathu ezahlukeneyo zokuba kutheni izinto ziyema okanye zime. Kodwa esona sizathu sibalulekileyo asisi 'Si' kodwa 'ndingu' luhlobo lolawulo, "Ndiyazi" indlela kukuqonda ukuqondwa kwelizwi kunye nentando yesizwe. Ke ngoko, ukusukela ngala mhla sifike kulawulo, samisela ukuba kulawulo oluza kudibanisa ingqondo eqhelekileyo. Saqala ukwenza ucweyo malunga nayo yonke indawo yobomi kunye nayo yonke imfuno ye-Istanbul. Sidibanisa abantu abafanelekileyo, iingcali, amaqabane kunye nabaxhamli. ”
EN EBALULEKILEYO KWABASEBENZI BASESELULEKILEYO NAMUHLA "
U-Imamoglu wathi isixeko masingabi yindawo ye-jigsaw, ngoko ke, inxaxheba yedemokhrasi, ingqondo kunye nesayensi, bagxininisa ukuba basikhokile. U-amomamoğlu wachaza ukubaluleka kwesiganeko ngala magama "Eyona nto ibaluleke kakhulu kumasifundisane esiyenzileyo ukuza kuthi ga ngoku, ngenxa yokuba umthetho ophantsi kolawulo lukamaspala kunye nosodolophu kukuqinisekisa ngokhuseleko lobomi kunye nepropathi yommi ngamnye ohlala kweso sixeko. Ke ungaqala, ke iimpahla. Iimfuno, iiprojekthi kunye neenkonzo kuzo zonke ezinye iindawo zinokuza emva kwazo. Kwelinye icala, zininzi iindawo kangangokuba le nto uyenzayo kwezi ndawo, umzamo ongakanani okanye into oyifumanayo ihlala ingacacanga. Ayaziwa kakhulu. Ayibalulekanga kakhulu. Ewe akunakwenzeka ukuba ubophele umsebenzi, ixesha kunye nezixhobo oza kuchitha kwezo ndawo kwezopolitiko. Ukunyikima komhlaba kunye nokulungiselela intlekele yenye yezi ndawo.Kodwa, kwaye kuphela xa udibana nenyikima okanye intlekele, kubaluleke kangakanani ukuzilungiselela kwakho kwangaphambilini, indlela ekucwangciswe ngayo kunye nendlela esindiswa ngayo ubomi. Mhlawumbi kungenxa yesi sizathu, ukuba abezobupolitika, ngakumbi abezopolitiko, benganikeli ngqalelo kakhulu kwezi ndawo. Kanye njengokuba bengawuhoyi umba wokufudumala kwehlabathi kunye nokukhutshwa kwekhabhoni diokside. Asilulo uhlobo lwezopolitiko, utshilo. Ebhekisa emsebenzini wabo kwinyikima eBeylikdüzü uSodolophu İmamoğlu, uthe:
ISIQINISEKISO SEBANDLA SISEKO BALULEKILEYO ESIBALULEKILEYO KWALO Dolophu ”
“Asinakubeka iintloko zethu kwisanti. Thina liyaluma. Owona mngcipheko ubaluleke kakhulu kwesi sixeko yinyikima. Kwaye lo mngcipheko awuyona ingozi encinci. Ngaphezu koko, lo mngcipheko awungeni kuphela kwi-Istanbul. ingozi All Turkey kaThixo. Sithetha malunga nesiphithiphithi esikhulu kunye nentlekele yelizwe apho ubomi buyeke khona kwaye uqoqosho luya kuba nomonakalo omkhulu. Sithetha ngomngcipheko omkhulu ojongene nezakhiwo ezikhoyo ze-1.2 yezigidi. Sithetha ngomngcipheko wokuba izakhiwo ze-48 eziliwaka ziya konakaliswa kakhulu kwaye amashumi amawaka wabemi aza kufa. Ke ngoko, njengabaphathi abatsha, injongo yethu ephambili kukwenza i-Istanbul ukuba sisixeko esingakwaziyo ukumelana nentlekele ingakumbi inyikima. Eyona njongo yethu ibonakalayo kukuvelisa imephu yendlela ngokuthathela ingqalelo zonke izisombululo zesisombululo kwezesayensi kwilizwe liphela nakwilizwe. Sifuna ukufumana indlela esekwe kwidatha yezenzululwazi kwaye sithathele ingqalelo izimvo zabo bonke abachaphazelekayo kwaye sithathe amanyathelo.
I-Imamoglu ifumanise ukuba i-Istanbul ilahlekile ixesha elininzi kwiinyikima kwaye yathi, nasıl Ngaba uluntu lungaba semngciphekweni omkhulu kangakanani ukuba unganakwa? Andikhathali. ” Echaza ukuba abafuni kuchitha xesha lingaphezulu, u-amomamoğlu uthe, i-hepsi Zonke iiyunivesithi, amaziko, imibutho engekho phantsi korhulumente, amaziko abucala nawasekhaya; ubuchule, uqeqesho kunye nobuchule. Wonke umntu ufanele ukubandakanyeka kuzo zonke iinkqubo zothintelo kunye nohlengahlengiso. Kungenxa yokuba lufuduko. ”
EMZANTSI UKUZE UQEQESHELWE IMALI, UTHANDA NJANI? "
Ngelixa kukho into etshayo efana nenyikima, u-amomamoğlu wayigxeka iprojekthi ye- "Channel Istanbul" kwaye wongeza, ndingathanda ukubuza onke ama-Istanbulites: Ukuba unebhajethi enomda, ungayisebenzisa njani uhlahlo-lwabiwo mali? Ukuba kunzima ukufumana ukutya kondla amalungu osapho lwakho. Ukuba awunamali yaneleyo yokondla kwaye ufundise abantwana bakho ngendlela elungileyo kwaye esempilweni. Ngaba ungangena ematyaleni uyothenga ifanitshala engafunekiyo kunye nenqabileyo endlwini yakho okanye ungaboleka ebhankini uye kwiholide? Njengosapho, utata, umama, ukhathalela ntoni xa uceba ukusebenzisa eyakho imali? Ukuba ungumrhwebi, umrhwebi, usomashishini, uziphatha njani? Njengabarhwebi abalumkileyo, abarhwebi okanye oosomashishini abakhaliphileyo, ngaba uthenga iikethi kunye nophumeleleyo? Okanye uyafuna ukwenza utyalomali oluya kuqinisekisa ukusindiswa kwenkampani yakho ”. Ukuqinisekisa ukuba iimpendulo zale mibuzo ziqinisekile, u-amomamoğlu uthe:
NGABA UNYULO LWETHU ALUNGABONAKALISI? "
I-Sorumlu Banoxanduva lokuhlonipha abazali abanemali ebekelwe umda kuhlahlo-lwabiwo mali bacinga ngoosomashishini abanenkathalo ngezihlandlo ezilishumi ngaphambi kokuba bachithe yonke imali. I-buttermilk ayenzi njengolu hlobo lomntu oluqala ukusela. Kodwa umlawuli woluntu osisilumko kufuneka enze njani isicwangciso sokuchitha uhlahlo-lwabiwo mali lukarhulumente? Ayisiyonto iphambili ukuphucula umgangatho wobomi besizwe, ingqesho, ukuvelisa, imfundo kunye nezempilo? Ngaba uza kuchitha izixhobo zesizwe kwiphupha eliluhlaza? Kukho intetho malunga neprojekthi ye-Channel Istanbul kwesi sixeko okwethutyana. Ngaba bakhe basibuza? Ngaba bayifumene imbono yethu? Amakhulu amawaka abantu abancinci, abantu abancinci, i-4 yezigidi zabantu abanetalente abangasebenziyo kwaye banqwenela. Xa bonke aba bantu behlwempuzekile. Ngayo yonke imveliso efunekayo. Xa kukho isidingo sokwakha iifektri ezininzi. Abantwana besi sixeko se16 yezigidi, ikamva lesixeko esikhulu, abanakutya ngokwaneleyo. Ngelixa inxenye enesisindo ayinakufumana imfundo yaseprayimari. Xa ufunda kwigumbi lokufundela elinabantu abaninzi, ngaba eyona nto iphambili esinokubaluleka kuyo yiKhanal İstanbul?
Echaza ukuba iCanal Istanbul ayisiyonkqubo yokuhamba nje yaselwandle, uImamoglu waveza ukuba le projekthi ibandakanya umngcipheko onokuthi uguqule inkqubo yolungelelwaniso lwendalo yesixeko nasemhlabeni naselwandle. U-amomamoğlu udwelise kwezi ngozi kwincoko yakhe ngolu hlobo lulandelayo:
Iproj le projekthi ichaphazeleka kakhulu kumachibi, kwiziseko, kwiindawo zezolimo, kwiindawo zokuhlala, kwinkqubo yomhlaba yezithuthi kunye nenkqubo yothutho yonke yesixeko. Ngaphandle kokutshatyalaliswa komhlaba wezolimo, esi siqithi siyakwakhiwa phakathi kwe-Irabul kunye nejelo elitsha lokuvulwa, imeko yokuvalelwa kwabemi be-8 yezigidi bavela. Ngale projekthi yasimahla, i-8 yezigidi iya kuvalelwa kwindawo enomngcipheko omkhulu wenyikima yelizwe. Akukho simo emhlabeni esiya kuthi sidlulisele inani eliphakeme kangaka kwelinye i-geography ngexesha leenyikima. Ngaba loluphi uhlobo lweprojekthi le ngenxa kaThixo? Siyintoni isizathu? Jonga, ijelo elikwiprojekthi li malunga neekhilomitha ezili-45 ubude, iimitha ezili-20,75 ubunzulu kwaye eyona ndawo incinanana ziimitha ze-275 ububanzi. Ijelo elidlula kwi-Sazlıdere kunye ne-Terkoz Basins. Ngamanye amagama, le projekthi itshabalalisa iiSazlıbosna kunye neeNdawo zeBheskoz zaseTerkoz. Iphethe umngcipheko wamanzi aphantsi komhlaba kunye nokucocwa kweTerkoz Lake. Kucacile ukuba i-Istanbul ibeka uloyiko olukhulu kwimfuno yokusela amanzi okusela. Esi kuphela sisizathu esaneleyo sokungayenzi le projekthi! Ngaba abantu baseIstanbul baya kusela amanzi olwandle? Kwelinye icala, le projekthi iza kuzisa i-1,1 yezigidi ezitsha zabantu ngommandla .. Ngamanye amagama, inani elitsha labemi elilingana no-6 Beşiktaş okanye u-5 Bakırköy isithili siyongezwa. Ngenxa yale projekthi, i-3.4 iya kudala izigidi ezihambo ezintsha. I-Istanbul traffic iya kunyuka ubuncinci ipesenti 10. Indawo yehlathi eyi-23 yezigidi zemitha yehlathi, indawo yezolimo ye-136 yezigidi zeemayile iya kutshatyalaliswa. Akusayi kubakho Sazlıdere Dam. I-Hydraulic Works ye-State (i-DSI) ke inike ingxelo engentle kwiprojekthi. Ngokwengxelo, i-29 yeebhedi zamanzi ezihlangabezana neemfuno zamanzi ziya kutshatyalaliswa. Ngokwakhiwa kwesitishi kuya kubakho ukumbiwa okukhulu. Ngokwengxelo ye-TMMOB, i-2.1 iya kuba nee-cubic metres zokumba. Iilori zemihla ngemihla ze-10 zamawaka okumbiwa ziya kuthatha inxaxheba kwitrafikhi ye-Istanbul. Akukacaci ukuba lo mngxunya uza kuwela phi! Ukwembiwa, umzekelo; Ukuba uGüngören-Esenler-Bağcılar uyachitheka kwezi zithili, ezi zithili ziya kunyuka malunga neemitha ze-30. "
"KUKHONA ISIBHENGEZO KWIZOBHALASI ZE-BOSPHORUS!"
1., 2., Kunye 3. Iidigri kwimimandla yenyikima ebonisa ukuba i-Imamoglu, "i-11 yeekhilomitha ukusuka kwiNorth Anatolian Fault, i-30 yeekhilomitha ukusuka kwiCinarcik Fault edlula. Izazinzulu zithi iProjekthi Istanbul Project iza kuphazamisa umhlaba kunye noxinzelelo loxinzelelo olungaphantsi komhlaba, kwaye ukugcwala okuphezulu kuya kumema inyikima entsha. Ukugcinwa kwendwangu yembali yeBosphorus kucacisiwe njengesizathu seprojekthi. Nangona kunjalo, ngeprojekthi, i-17 ichaphazela indawo ye-SIT yeemitha zesikwere. IBathenoa yamandulo yeSixeko kunxweme lweChibi leKüçükmekmece kunye neYarımburgaz Cows yenye yezindawo zokuqala ezikwindawo yeprojekthi. Ndingathanda ukutsala umdla wakho kwitrafikhi yeBosphorus. Njengoko kubango kwifayile yesicelo se-EIA, ukugcwala kweBosphorus ayisiyonyani xa kuthelekiswa neminyaka, kodwa ngokuchaseneyo, ngakumbi kunyaka wokugqibela we-10, ukwehla kwepesenti ye-22,46 kubonwa. Echaza ukuba ukungakhathali akuyi kuphelela e-Istanbul, u-amomamoğlu ugxininise ukuba uLwandle iMarmara kunye noMmandla usemngciphekweni omkhulu:
"Indawo yezolimo nehluma kakhulu ye45 yeekhilomitha ubude kunye ne-150 yeemitha ububanzi iya kususwa ngonaphakade. Kuba i-Istanbul Peninsula iyakushiya iTrace, iibhlorho ezintsha zonxibelelwano ziya kufuneka. Ngenxa yokuphuma kwenye indawo ukusuka kuLwandle oluMnyama ukuya kulwandle lweMarmara, ulwandlekazi iMarmara luya kungcoliswa kakhulu. Le meko ibeka emngciphekweni ubomi beLwandle iMarmara kunye neendawo zokuloba kunye nabantu abahlala kweli shishini. Ijelo liya kubangela utshintsho lwemozulu. Kunye nomhlaba otshabalalisiweyo, kuya kutshatyalaliswa izilo zasendle. ”
"XA KUQHUTYWA LONTO, KUFANELEKILE UKUPHELA"
U-amomamoğlu wakhankanya ukuba amaziko amaninzi anomdla, izixeko, iifektri, izikolo kunye nemisebenzi zinokudalwa zinemali ekufuneka zichithwe eKhanal İstanbul wathi, ngomnye umba wokuba izigidi zabemi kumda wendlala bangaqeshwa kwizixeko nakwiilali zabo. Ngamafutshane, le projekthi ayisiyiyo iprojekthi yokungcatsha i-Istanbul. Yiprojekthi yokubulala ngokusemthethweni. Yiprojekthi yentlekele engeyomfuneko eIstanbul. Xa le projekthi igqityiwe, i-Istanbul iya kugqitywa. Esi sixeko simangalisayo siya kuba sisixeko esingafumanekiyo. Umoya ococekileyo, ulwakhiwo lwamanzi uya kusala yedwa kunye neengxaki ezingenakusonjululwa ngokuhambelana nezithuthi. Nokuba iBosphorus inqamleza okanye ukuwela ulwandle ngenxa yokuhamba ngeenyawo, kwaye ayimfuneko. Yayilungiselelwe kuphela ukudala iindawo ezintsha zerente, kwaye iziphumo zayo ezonakalisayo azange ziqwalaselwe. Asinakho kwaye asizukuvumela ukutshutshiswa kwendalo esingqongileyo, indawo esihlala kuyo kunye nezitya zamanzi zesi sixeko samandulo xa kunokwenzeka umntu enze imali. Siya kuzithintela iimpazamo ngobuchule bakho, uvakalelo kunye nesibindi.
Ngengqondo yakho eqhelekileyo, siya kwenza isixeko sethu sikhuseleke ngakumbi, siphile ngakumbi kwaye sinomdla ngakumbi kwisigidi se-16. Enkosi, ubekhona ”.
Abathathi-nxaxheba abaziingcali, i-2-3 izakubanjwa phakathi kukaDisemba ukuhlala, umxholo wenyikima eIstanbul uza kutyala imali.
I-KOS: 3. Isikhululo seenqwelomoya asithuthi, asinayo i-Istanbul…
Isicwangciso sokubulala siBhuqulwe ngokuKhathalela iMaster
Imamoglu: 'Ndifuna ukuxoxa nge-Istanbul ye-Istanbul no-Erdogan'
USodolophu İmamoğlu: 'iHaydarpaşa kunye nesikhululo sikaloliwe seSirkeci'
Umongameli İmamoğlu kwisikhululo seenqwelomoya e-Istanbul…